Yonke into ofuna ukuyifumana malunga ne-Invoice yeProforma | Ezezimali
Ngaba uthenge imoto okanye inkonzo eza kubonelelwa kwikamva? Ukuba kunjalo, baya kukunika, nge-Intanethi okanye ngeposi, i-invoyisi enkulu. Olu luxwebhu olusetyenziswa kumashishini amaninzi kwaye akukacaci ukuba yenzelwe ntoni okanye isetyenziselwa ntoni.
Ukuba uyazisebenza, yenza iinkonzo ngeintanethi, okanye xa uthenga iimveliso okanye iinkonzo, kuya kufuneka uyazi ukuba yintoni i-invoyisi eyi-proforma, injani, isetyenziswa nini, yintoni eyahlula-hlula kwi-invoyisi yesiqhelo, kwaye kuthetha ntoni kuba ngubani okhuphayo kwaye ngubani ofumana enye.
Eli nqaku lincinci liza kukuxelela yonke into ekufuneka uyazi malunga nabo, ke, ekugqibeleni, uya kuyazi yonke into esikuxelele yona, kunye nezinye izinto ezibaluleke ngokulinganayo.
1 Yintoni i-invoice yeproforma?
2 Yintoni i-invoyisi yeprorma?
3 Iqulathe ntoni i-invoyisi yeprorma
4 Buyintoni ubunyani be-invoyisi yeproforma?
5 Ungayisebenzisa nini i-invoice yeproforma?
6 Eminye imizekelo apho ii-invoyisi zeproforma ziya kukunceda
Yintoni i-invoice yeproforma?
Omnye I-invoyisi yeProforma luhlobo loyilo lwe-invoyisi eqhelekileyo neyangoku, kodwa ngaphandle kwexabiso lencwadi.
Ikhonza thembisa ukuhanjiswa kwemveliso okanye inkonzo kwikamva, eya kuthi emva koko ikhutshwe i-invoyisi eqhelekileyo enedatha efanayo kunye nezixa eziqulathwe kwi-invoice yeproforma.
Kukuzibophelela okuvela kumthengisi ukuya kumthengi ukuba baya kubonelela ngemveliso okanye ngenkonzo ngexabiso elithile.
Umzekelo: umntu eJarandilla de la Vera ukhangela imoto kwi-Intanethi, i-SUV, umzekelo, iNissan Juke.
Akafumani namnye emantla eCáceres, kwaye uyifumana ngexabiso elihle eAlcalá de Henares, eMadrid, kodwa akakwazi kuhamba kwangoko, okanye umthengisi akanayo imoto elungele ukuhambisa.
Ukuqinisekisa ukuba umthengi uya kuba nemoto yakhe ngexabiso alifumeneyo, umthengisi okanye umthengisi umthumelela a Invoyisi yeProforma yokuqinisekisa ixabiso kunye nentengiso yemoto.
Shwa nkathelo: kukuzibophelela kurhwebo.
Yintoni i-invoyisi yeprorma?
Uninzi luhlala luphutha i-invoice ye-proforma ye-invoyisi, kodwa oku akunjalo.
Ngaphambi kokuba ucacise ngcono ukuba yeyantoni, kufuneka uyazi loo nto I-invoice ye-proforma ine-accounting efanayo nokusebenza, umzekelo, ikowuti, okanye intengiso yokuthengisaOko kukuthi, akukho xabiso lokwenza ingxelo, ngenxa yoko akukho kukhutshwa kwayo nayiphi na invoyisi yeprorma ekufuneka ibhengeziwe.
Ikhonza ngaphezu kwayo nayiphi na into ukuze zombini umthengisi njengomthengi uzikhusele kwimeko apho amaxabiso anokutshintsha, okanye ukuqinisekisa ixabiso lentengiselwano, kwaye ayisetyenziswanga ekuthengweni okuncinci kuphela kodwa nakwindlela zorhwebo zamazwe aphesheya zexabiso lemveliso kunye nemali enkulu, ukuze kubhalwe ixabiso lentengiselwano, okanye njengemodeli zentengiso.
Kumthengi umele ukhuseleko, njengakumzekelo wangaphambili, ukuba iNissan Juke yakhe iya kuba nexabiso ekuvunyelwene ngalo, nokuba iiveki zidlulile, kwaye ngelo xesha ixabiso lenyukile ... okanye liwile. Into engammeliyo kumthengi, sisiqinisekiso kwimeko apho imoto iya kuthi ibonakale inesiphene ... ngenxa yokuba kusetyenziswa i-invoyisi eqhelekileyo, okanye ikhontrakthi.
Kufuneka ucace ngumahluko, kwaye nokuba ungumthengisi okanye ungumthengi, ungaze ubhidanise izibophelelo nayo yonke into efunwa yi-invoice ye-proforma ngenxa yoko ingakwenziyo, ngaphandle kokuyibhidanisa ne-invoice.
Iqulathe ntoni i-invoyisi yeprorma
Esona sizathu siphambili sokuba abantu bahlala benze impazamo nge-invoice yesiqhelo ye-invoyisi, kukuba zinedatha efanayo.
Ngokwenyani umahluko kukuba i-invoice ye-proforma kufuneka ngokucacileyo kwaye ibonakale inesihloko "INKQUBO”Kumxholo wolu xwebhu, kwaye loo nto inakho okanye ayinakubalwa okanye isongelwe njengee-invoyisi
Idatha ekufuneka i-invoice ye-proforma iqulethe oku kulandelayo:
Isihloko kufuneka sibe nesihloko esithi "invoice yeproforma", ngokucacileyo nangokucacileyo
Umhla wokukhutshwa kwe-invoyisi yeproforma
Igama lorhwebo okanye igama lenkampani
Inombolo yeVAT yoluntu
Igama elipheleleyo okanye igama lenkampani
NIF, DNI okanye NIE
Inkcazo ecacileyo kunye neenkcukacha zorhwebo okanye iinkonzo, ukucacisa ubungakanani okanye iiyunithi zemveliso
Ixabiso lento, ixabiso lilonke kunye / okanye imali ekuqhutywa ngayo intengiselwano (rá)
I-inshurensi, ukuhambisa, izongezo, njl.
Inani leephakeji, ubunzima obukhulu, umnatha kunye nevolumu
Indlela yokuhlawula kunye neemeko
Umhla wokusebenziseka koxwebhu
Kwiintengiselwano zamanye amazwe, kulapho zisetyenziswa kakhulu:
Inombolo yesazisi yerhafu (kwimeko yokusebenza koluntu)
Kwaye akukho mfuneko yokuba iqulethe utyikityo okanye isitampu senkampani, ngaphandle kokuba umthengi acele ukuba i-invoice yeproforma igximfizwe.
Buyintoni ubunyani be-invoyisi yeproforma?
Kukho ingxaki ngokubhekisele kukunyaniseka kwe-invoyisi yeproforma.
Kungenxa yokuba ubunyani bayo, njengoko sikuxelele, ayidluli ngaphaya kokuba ne indalo efundisayo okanye njengesindululo sokuthengisa, esifana nesilinganiso sexabiso okanye intengiso ethunyelwe kumthengi okanye kwithemba.
Ayisebenzi njengobungqina bentlawulo, okanye ukufuna nantoni na enxulumene ne-invoyisi okanye uxwebhu lwe-accounting.
Yintoni eyenzelwe oko? Isebenza kuphela njengesithembiso sokuhlonipha ixabiso leemveliso okanye leenkonzo ngexesha lokusebenza okuqulethwe kwi-invoyisi yeproforma.
Ayinabunye ubunyani balo naluphi na uhlobo, kwaye isetyenziswa rhoqo kunaniselwano lwamazwe aphesheya, ngaphakathi nangaphandle kwe-European Union, nangona ligama loxwebhu kuphela elitshintshayo.
Ungayisebenzisa nini i-invoice yeproforma?
Nangona olona phumo lusebenzayo yile thembisa ukuhambisa imveliso okanye inkonzo, ayisiyiyo kuphela enezinto ezingekho mthethweni.
Khawufane ucinge ukuba awuqinisekanga ngedatha yomthengi, umzekelo, ukuba ulahlekile kwi-ID yomntu, kunye nedilesi yakhe yezemali kwaye awukwazi ukunxibelelana nomthengi, kodwa kufuneka uthumele umxhasi uxwebhu, nokuba bakucelile i-invoyisi .
Njengoko inazo, ngeenjongo ezisebenzayo, akukho semthethweni, ungayisebenzisa njengoyilo.
Ithumela kumthengi wakho, okanye wena njengomthengi uyayifumana, 'ngeenkcukacha zobuxoki' okanye umzekelo, kwaye ukuba bobabini bayavuma, umthengi uthumela idatha yabo echanekileyo, wamkela amaxabiso kunye nobungakanani kunye neendleko ezinxulumene noko, ngoku, ewe, ungenza i-invoyisi yesiqhelo yokugqibela.
Oko kukuthi, ukongeza ekusebenzeni njenge Ukuhanjiswa kwesithembiso, kuyiloo ukuze 'ungachithi' ii-invoyisi eziqhelekileyo, into, njengoko uyazi kakuhle, awungekhe uyikhuphe ngoluhlobo kuba ewe.
Ukuba awusebenzisi ii-invoice zeproforma, kuya kufuneka uzinike ezi zinto. Ukuba ungumthengi, unokucela enye yokonga ixesha xa ufuna ukucinga ngcono malunga nokuthengwa okunokubakho okanye ukwenza ikhontrakthi yeenkonzo okanye iimveliso.
Kananjalo umthengisi okanye inkampani, can Sebenzisa i-invoice yeproforma ukonga ixesha kwimeko yokuba uphelelwe zii-invoyisi eziqhelekileyo. Ungathumela i-invoice yeproforma ukuze umthengi athembise ukuhanjiswa kwe-invoice yokugqibela kwangoko xa enalo olu xwebhu, ukuze xa enazo kwakhona, angachaphazeleka kukuhla kwexabiso kweemveliso okanye iinkonzo.
Eminye imizekelo apho ii-invoyisi zeproforma ziya kukunceda
Nangona sele sichazile ukusetyenziswa kwezinye kwe-invoyisi yeproforma, ikunceda ngakumbi kwizinto ezingaphezulu kokuba ucinga.
Sikunika imizekelo apho ii-invoice zeproforma ziya kuba luncedo kakhulu:
Ngokwesiqhelo, ii-invoice zeproforma zisetyenziswa ngamasiko, ngaphakathi nangaphandle kwe-European Union ukubonisa ixabiso lezinto ezithengiswayo.
2.- Inkxaso-mali kunye neegranti
Ezinye izibonelelo, ezinjengalezo zinikwa oosomashishini abatsha, zifuna utyalomali lwezixa ezithile kwishishini, kwaye ungazisa iproza ​​invoyisi ukuzithethelela.
3.- Kwimisebenzi yezemali
Xa umntu esenza isicelo semali-mboleko, nokuba yinkampani okanye ngumntu othile, umntu okanye inkampani kufuneka yenze utyalo-mali oluthile, kwaye iqinisekise ukuba isiqinisekiso okanye isiqinisekiso, ii-invoyisi ezihambelanayo zeproforma ziyavezwa.
4.- Njengenkqubo yecandelo
Amanye amashishini asebenzisa olu xwebhu 'ukwahlula' iimveliso ezithile. Umzekelo, ukuba umthengi akanamali yaneleyo okanye umthengisi akanalo iyunithi ekhoyo, inokusebenza njengenkqubo ebekelwe bucala, ukukhusela ukungazinzi kwemveliso.
5.- intengiso yokuthengisa
Okokugqibela, siyikhankanyile, kodwa lolunye usetyenziso: intengiso yokuthengisa. Ungathumela izibonelelo zentengiso ngohlobo lwe-invoyisi yeproforma, ngexabiso lesaphulelo kunaleyo uyinikelayo kwabanye, kwaye ngale ndlela, unyanzelekile ukuba ulihloniphe ixabiso ngeli xesha ulinikiweyo.
I-invoice ye-proforma sisiqinisekiso sokuba eli xabiso liya kuba semthethweni ngelixesha lichazayo kwaye lingenabunyani bolawulo-mali. okanye nantoni na, sisithembiso kuphela, kodwa ungasisebenzisa njengoyilo kwaye unokusetyenziswa okuninzi, kwanakwitransekshini yamanye amazwe, ngakumbi kumasiko, ngaphakathi nangaphandle kwe-European Union.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » ishishini » iinkampani » Yonke into ofuna ukuyifumana malunga ne-Invoice yeProforma
USergio Lozano sitsho
Ndivuyisana nawe ngenqaku elinomdla. Enye yezimbalwa ezigqityiweyo kangangokuba ndifumene ii-invoice zeproforma. Inye kuphela into yokuba andinakukuphepha ukufunda ukuba ubeke inani le-VAT yoluntu njengolwazi olunyanzelekileyo kwi-invoice ye-proforma, kodwa oku kwenzelwe kuphela abo baphantsi kwe-ROI okanye iRegistry ye-Intra-Community Operators, irejista apho zifumaneka kuphela abo basebenzisi bamanye amazwe. Umzekelo, kumzekelo obonakaliswe ekuqaleni malunga nemoto, kuba ingumbutho kazwelonke, ayifuni nombolo ye-VAT yoluntu. Kule meko, umntu kufuneka asebenzise imowudi 036 kwaye ayibonise kwibhokisi 129.
Okokugqibela, bendifuna ukongeza ukuba i-invoice yeprrofroma isetyenziswa ngabangenisa elizweni ukucela iphepha-mvume lokungenisa, njengobungqina bokuba le ntengiselwano yamazwe aphesheya iza kwenziwa.
Bonisana, invoyisi yeproforma etyikitywa ngumthengi, ngaba irhafisiwe kwirhafu yesitampu?
Iidipozithi ezidityaniswe notshintshiselwano, ngaba ziluncedo?